”फ्रान्समा विद्यार्थीलाई पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन देखाउने शिक्षकको घाँ’टी रे’टेर ह*त्या” ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/”फ्रान्समा विद्यार्थीलाई पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन देखाउने शिक्षकको घाँ’टी रे’टेर ह*त्या” !
”फ्रान्समा विद्यार्थीलाई पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन देखाउने शिक्षकको घाँ’टी रे’टेर ह*त्या” !
काठमाडौँ । फ्रान्समा विद्यार्थीलाई पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन देखाउने एक शिक्षकको शुक्रबार राजधानी पेरिसमा घाँटी रेटेर हत्या गरिएको छ । ती शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई फ्रान्सको चर्चित व्यङ्ग्य पत्रिका चार्ली हेब्दोमा छापिएको पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन देखाएको बताइएको छ । उनीमाथि स्थानीय समय अनुसार साँझ ५ बजे आक्रमण भएको थियो ।
आफैँले पढाउने विद्यालय नजिकै उनको हत्या गरिएको हो । प्रहरीले आक्रमणकारीको गोली हानी हत्या गरेको छ । उनलाई गिरफ्तार गर्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि प्रहरीले गोली हानेको थियो । आक्रमणकारीको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।
राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले घटनास्थलको निरीक्षण गरेका छन्। उनले सो घटना इस्लामिक आतंकवादी आक्रमण रहेको बताए । वाक स्वतन्त्रताबारे पढाएकै कारण शिक्षकको हत्या भएको म्याक्रोँको भनाई छ । शिक्षकको नाम खुलाइएको छैन ।
सन् २०१५ मा स्थानीय व्यंग्य पत्रिका सार्ली एब्डोले प्रकाशित गरेको पैगम्बर मोहम्मदको विवादास्पद कार्टूनका कारण पत्रिकाको कार्यालयमा आतंकवादी आक्रमण भएको थियो । अहिले चार्ली हेब्डोको कार्यालय गोप्य ठाउँमा राखिएको छ ।
ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२२१९७३५ आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल कार्तिक २ गते आइतबार ई. सं. २०२० अक्टुवर १८, नेपाल सम्बत ११४० कौलाथ्व द्धितीया, प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, असोज शुक्ल द्धितीया, चन्द्रमा तुला राशिमा, स्वाति नक्षत्र, प्रीति योग, बालव करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०६ः०६ बजे, सूर्यास्त साँझ ५ः३२ बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको तुला राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा घीउ खाएर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ ।
आज कुनैपनि महत्वपूर्ण कार्य तथा दिवश परेको छैन । कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ८ बजेर ५८ मिनेट देखि ११ बजेर ४९ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
विप्लवले भारतीय गोर्खा सैनिकलाई लेखेको यस्तो सन्देशले भारतमा खैलाबैला, मोदीलाई तनाव !